सम्झनामा गणेशमानजी र कांग्रेसको राजनीति - सम्झनामा गणेशमानजी र कांग्रेसको राजनीति
सम्झनामा गणेशमानजी र कांग्रेसको राजनीति
२०७५, २6 चैत्र, 10:38:50 AM
जनआन्दोलन दिवस ०४६ को सन्दर्भमा
आज चैत्र २६ , ऐतिहासिक जनआन्दोलन दिवस ०४६ को स्मरण गर्ने दिन । जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहलाई सम्झने र उहाँको योगदानको चर्चा गर्ने दिन पनि हो । अनौठा विशेषताका गणेशमान सिंहको सम्झना गर्दै त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा घटित अनेकौं घटनाक्रम सम्झदा राजा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसाद बीचका ऐतिहासिक वार्ताको सन्दर्भ जोडिन आईपुग्छ ।
महात्मा गान्धी जन्मिएका भए योगी नरहरिनाथ जति वा माओत्सेतुङ् जन्मिएका भए कुनै हवल्दार जतिमात्र कदर पाउने यो मुलुकमा गणेशमान सिंहको जन्म नै ‘जीओग्राफिकल मिस्टेक’ ले नेपालमा भएको हो कि ! लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अनेक निर्लज्ज र लज्जास्पद राम–रमिता हेर्नु र गणेशमानजीलाई सम्झिन पुग्दा यस्तै लाग्छ । कहाँ, पाएको प्रधानमन्त्री पद सहज रुपले त्यागेर त्यो पद आफ्ना सहकर्मी नेतालाई सुम्पिने गणेशमान सिंहको त्याग, कहाँ आज पदलोलुपताको पराकाष्टास्वरुप आधा दर्जनसम्म उपप्रधानमन्त्री भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल ।
२०७२ मा देशले सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको शताब्दी, एक वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइयो । उहाँका नाममा विभिन्न कीर्ति र कृति स्थापना भए । पुरस्कार र सम्मानका कार्यक्रमहरू आयोजना भए । हुलाक टिकट र सिक्का प्रकाशनमा ल्याउने कार्यक्रम भए । नेपाली राजनीतिका सर्वमान्य नेता तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सर्वोच्च सेनानी यी व्यक्तित्वलाई श्रद्धाका अनेकानेक शब्दहरू खर्च गरिए । बस तीन वर्ष बित्यो । फेरि कुकुरको पुच्छर त बाङ्गाको बाङ्गै !
कांग्रेसलाई गाली वा निन्दा गरेर होइन कांग्रेससँग मिलेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गर्नु कम्युनिष्टहरूको अस्तित्व, औचित्य र भलाईका निम्ति आवश्यक छ भन्ने सन्देश दियो । यही सन्देशको भावभूमि र प्रेरणामा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा कम्युनिष्टहरूलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मूलधारमा ल्याउन गणेशमानजीको नेतृत्वमा सम्भव भयो । वीपीले प्रतिपादन गर्नुभएको मेलमिलाप नीतिलाई जनआन्दोलनपछि ०४७ को संविधानले वैधानिकता दिएको मान्न सकिन्छ, जसलाई गणेशमानजीको नेतृत्वले सार्थक बनायो । त्यसपछि गणेशमानजी सर्वोच्च प्रजातन्त्रवादी नेता मात्र हुनुभएन, नेपाली राजनीतिका ‘सर्वमान्य नेता’ नै हुनुभयो ।
कतिपय मानिसहरू ठान्दा हुन् गणेशमान सिंह एउटा कठोर मानसिकताको हठी मानिस होला । भेट्न नपाएकाहरूले यस्तो ठानेमा उनीहरूको सोचाइ क्षम्य हुन्छ । तर देखे–भेटेका मानिसले पनि यस्तो धारणा बनाए भने त्यस्ता मानिसहरूले गणेशमानलाई देखेर पनि चिनेनछन्, भेटेर पनि जानेनछन्, बोलेर पनि बुझेनछन् भन्नैपर्छ । साह«ै सरल, सोझो, सज्जन र सद्गुणी मानिसको नाम हो गणेशमान सिंह ।
क्षेत्रपाटीको चाक्सीबारीबाट उहाँ निस्किने बाटो ठमेलको काठमाण्डु गेष्ट हाउसकै अगाडि गेटमा च्याँसे कदकी एउटी ग्रामिण बृद्धा बस्थिन् । सायद ती एक्ली र असहाय हुनन् । ती बृद्धाका अगाडि जहिल्यै पनि गणेशमानजी मोटर रोक्न लगाउनु हुन्थ्यो र खल्तीमा हात हाल्दा जति आउँछ, ५० देखि १०० वा ५०० को एउटा नोट उनको हातमा थमाएर मात्र हिँड्नुहुन्थ्यो, मानौं भगवानसँग भेट भएको छ, भेटी चढाएर मात्र हिँड्नुपर्छ ।
बीपीले कुनै नयाँ कदम चलाउनु पर्ने भएमा सर्वप्रथम त्यो बिचारबारे गणेशमानजीसँगै सल्लाह गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । जस्तो राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर निर्वासन त्यागी स्वदेश फर्कनेबारे उहाँले सर्वप्रथम गणेशमानजीसँगै सल्लाह गर्नुभएको थियो । तर मेलमिलापबारे उहाँ आलोचनात्मक हुनुहुन्थ्यो । गणेशमानजी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, “निर्वासनमा बसिरहनु भनेको हामीले मन्दविष पिएर आफ्नो अस्तित्व विसर्जन गर्नु हो, मेलमिलापको नीति बोकेर स्वदेश फर्किनु भनेको राजाको टाङ्मुनि छिर्नु हो । धर्मसंकटको त्यो बखतमा मैलेचाहिँ मेलमिलाप नीतिलाई एउटा रणनीतिक प्रयोगको रुपमा मात्र लिएको हुँ ।”
२०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले चलाएको सत्याग्रह आन्दोलनका लागि गणेशमानजीको सक्रियता उल्लेखनिय थियो । त्यसबेला कम्युनिष्ट पार्टीका मनमोहन गुट, सहाना प्रधान गुट, मानन्धर गुटहरू आदिले कांग्रेसको सत्याग्रहसँगै शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा सहकार्य गरेका थिए । यसले जनतामा यी कम्युनिष्ट गुटहरूप्रति सकारात्मक प्रभाव पा¥यो । कांग्रेसलाई गाली वा निन्दा गरेर होइन कांग्रेससँग मिलेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गर्नु कम्युनिष्टहरूको अस्तित्व, औचित्य र भलाईका निम्ति आवश्यक छ भन्ने सन्देश दियो । यही सन्देशको भावभूमि र प्रेरणामा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा कम्युनिष्टहरूलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मूलधारमा ल्याउन गणेशमानजीको नेतृत्वमा सम्भव भयो । वीपीले प्रतिपादन गर्नुभएको मेलमिलाप नीतिलाई जनआन्दोलनपछि ०४७ को संविधानले वैधानिकता दिएको मान्न सकिन्छ, जसलाई गणेशमानजीको नेतृत्वले सार्थक बनायो । त्यसपछि गणेशमानजी सर्वोच्च प्रजातन्त्रवादी नेता मात्र हुनुभएन, नेपाली राजनीतिका ‘सर्वमान्य नेता’ नै हुनुभयो ।
सन् १९४७ जनबरी १८ का दिन कलकत्तामा नेपाली कांग्रेस स्थापनाको शिलशिलामा एउटा भेलामा बीपीसँगको पहिलो भेटबारे गणेशमानजीले ‘मेरा कथाका पानाहरू’ मा लेख्नुभएको छ, “एकै छिनपछि हलमा सनसनाहट र चलमलाहट पैदा भयो । कोइरालाजी, कोइरालाजी भन्दै मानिसहरू उठेर झ्यालबाट घाँटी तानीतानी हेर्न थाले । सबैले हेर्न थालेपछि मैलेपनि उत्सुकता थाम्न सकिनँ र झ्यालबाट बाहिर हेरेँ । दुई तीनजना, जो हलतिर आइरहेका थिए, तिनीहरूमा कोइरालाजी पनि हुनुहुन्थ्यो । मलाई के लाग्यो भने तिनीहरूलाई भ्रम भएको छ— कोइरालाजी आउनुभएको छैन । ती तीन जनामध्ये जो सबैभन्दा अघि थियो, त्यो एकजना दुब्लो–बिल्कुलै सिद्राजस्तो सुकेको र अग्लो थियो । सेतो खादीको कुर्ता र पाइजामा लगाएको गोरो ठिटो सायद कोइरालाजीको कुनै साथी थियो, जसलाई मानिसहरू गल्तीले कोइरालाजी ठानिरहेका थिए । कोइरालाजीका बारेमा मेरो मानसमा जुन चित्र थियो, त्यो एउटा सामन्तको जस्तै मोटोघाटो, लामा–लामा जुँगा भएको, आधा कपाल खुइलेको, भ्यात्त भुँडी निक्लेको र दौरासुरुवालमाथि इष्टकोट भिरेको होला भन्ने थियो ।……विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको भाषण सुनेपछि भने मलाई लाग्यो म जसको खोजीमा थिएँ, त्यो व्यक्ति यही हो र यसैले केही गर्छ । कोइरालाजीका प्रति मेरो मनमा सम्मान र श्रद्धा उब्जेको कारण यही हो र मैले त्यसैबेला मनमनै अठोट गरेँ, चाहे जे होस्, यो मानिसलाई साथ दिनुपर्छ ।”
२००३ सालदेखिको यो सम्बन्ध उहाँहरूको निधनसम्म कायमै रह्यो । बीपी उहाँलाई ‘हाम्रो अनमोल मित्र’ भन्दै ‘मैले आजसम्म यति दृढ निश्चयी मानिस देखेको छैन’ भन्नुहुन्थ्यो । बीपीसँग राजनीतिक विमति भएमा गणेशमानजी हक्की शैलीमा आफ्ना विमतिका बुँदा राख्ने गर्नुहुन्थ्यो । बीपीसँग आफ्ना कुरा निर्धक्क र जोडदार रुपमा राख्नसक्ने हैसियत गणेशमानजी बाहेक अरूसँग थिएन । किसुनजी (तत्कालीन प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई) लाई पनि आफ्ना कुरा भन्नमा कुनै संकोच थिएन, तर उहाँ विषयवस्तुलाई विनोदी शैलीमा टुङ्ग्याउने गर्नुहुन्थ्यो ।
२०३७ सालमा जनमत संग्रहको परिणामलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने बीपीको विचारप्रति गणेशमानजी क्रुद्ध हुनुभएको थियो । गणेशमानजी त जनमत संग्रहमा कांग्रेस सहभागी हुन पञ्चायती सरकारले ५ वटा शर्त पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा पञ्चहरूको एकपक्षीय सरकार भंग गरी सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकारको गठन, पञ्चायतका सबै निकायहरूको विघटन आदि थिए । जनमत संग्रहमा धाँधली भएको भन्ने उहाँको जोडदार विरोध थियो । बीपीले जनमत संग्रहको परिणामलाई स्वीकार गरिदिँदा उहाँ बीपीसँग निकै रिसाउनु भएको थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेता निर्विरोध चुनिएर प्रधानमन्त्रीका लागि तयार हुँदा गिरिजाबाबुले भन्नुभएको थियो, ‘यो अनएक्स्पेक्टेड जिम्मेवारी आइलाग्यो । चलाउन सक्छु कि सक्दिन…।” उहाँलाई ढाढस दिँदै गणेशमानजीले भन्नुभयो, “तपाईले यस्तो कुरा सोच्ने नै होइन, आमाको गर्भबाट कसले जानेर आएको छ ? गर्दैजानुस्, तपाईसँग हामी छौँ ।” गिरिजाबाबु भन्नुहुन्थ्यो, ‘आदरणीय गणेशमानजीलाई म सान्दाजु सरहको नेताका रुपमा आदर गर्छु, उहाँका निर्देशनअनुसार काम गर्छु ।’
एकबिहान बीपीले भेट्नका लागि बोलाउँदा उहाँ क्रुद्ध मुद्रामा बीपी निवासमा पुग्नुभएको थियो । ट्याक्सीबाट ओर्लँदै उहाँ, “यसले (बीपीले) मलाई के भन्न बोला’को हो, सबै थाहा छ….” भन्दै आउनु भयो । बीपीले ढोकामा स्वागत गर्दै भित्र लिएर जानुभयो । फर्किँदा उहाँ निकै शान्त र सकारात्मक देखिनु हुन्थ्यो र बीपीलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, “एउटा प्रजातन्त्रवादीले प्रजातन्त्रको उचित संस्कार अपनाएर परिणाम स्वीकार गर्नु पञ्चायतलाई समर्थन होइन, हाम्रो रणनीतिक कदम हो, गणेशमानजी, परिणाम स्वीकार नगर्दा हामीले पाएको २० लाख भोटलाई रद्दीको टोकरीमा फालेकोजस्तो हुन्छ, परिणाम स्वीकारेर हाम्रो मतलाई शक्तिको स्रोत मानी अगाडि जाने हाम्रो बाटो कसले छेकेको छ र भन्छ ऊ, हेर्दैजाउँ, पहले जीत अनाडी का आगे जीत खिलाडी का….!” गणेशमानजीको द्विविधा वा विमतिमा सम्झाउन सक्ने क्षमता बीपीमा मात्र थियो ।
२०४८ को आमनिर्वाचनपछि उहाँ र गिरिजाबाबुका बीच सम्बन्ध बिग्रेको थिएन । कांग्रेस संसदीय दलको नेता निर्विरोध चुनिएर प्रधानमन्त्रीका लागि तयार हुँदा गिरिजाबाबुले भन्नुभएको थियो, ‘यो अनएक्स्पेक्टेड जिम्मेवारी आइलाग्यो । चलाउन सक्छु कि सक्दिन…।” उहाँलाई ढाढस दिँदै गणेशमानजीले भन्नुभयो, “तपाईले यस्तो कुरा सोच्ने नै होइन, आमाको गर्भबाट कसले जानेर आएको छ ? गर्दैजानुस्, तपाईसँग हामी छौँ ।” गिरिजाबाबु भन्नुहुन्थ्यो, ‘आदरणीय गणेशमानजीलाई म सान्दाजु सरहको नेताका रुपमा आदर गर्छु, उहाँका निर्देशनअनुसार काम गर्छु ।’
०५० सालमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणापछि बोलाइएको कांग्रेसको भेलामा १/२ सहभागीले गणेशमानजीको आलोचना गर्दा गिरिजाबाबुले भन्नुभएको थियो, “यो मन्च गणेशानजीको आलोचना गर्ने ठाउँ होइन । उहाँको अपमान मेरो अपमान हो । म त्यो सहन सक्दिन ।” कालान्तरमा कहाँबाट उहाँहरूका बीच असमझदारी बढेर गयो । भनिन्छ, पार्टीमा विग्रह ल्याउन षड्यन्त्रकारीले भेदियाहरूलाई नेताहरूको नजिकमा घुसपैठ गराउन सफल भए । त्यसको महँगो मूल्य कांग्रेसले चुकाउनु प¥यो । त्यसको पहिलो रुप मध्यावधि निर्वाचन र कांग्रेसको पराजय नै थियो ।
गणेशमानजीको सपना थियो, मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएपछि आर्थिक क्रान्तिको युग सुरु होस् । देशका सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनसमुदाय समान रुपले सहभागी र समावेशी हुने प्रजातन्त्रको विकास होस् ।
२०५४ सालमा गणेशमानजीको निधन भयो । एक महान राजनेताको निधन एउटा युगको अन्त्य र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको असाधारण क्षतिका रुपमा आयो । त्यागको आदर्शवादी राजनीतिको त्यो क्षति कांग्रेसको मात्र होइन लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै क्षति हो । श्रद्धेय गणेशमानजीप्रति मेरो भावपूर्ण श्रद्धासुमन ।
राजा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसाद बीचका ऐतिहासिक वार्ता